Reny Nidaroka An-Janany, Lahatsary Niparitaka Be Tao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2014 11:22 GMT
Reny iray tsy fantatra anarana sy ny zanany vavy roambinifolo taona no votoatin'ny lahatsary, izay nalefa ary naverina nalefa tao amin'ny Facebook sy tambajotra sosialy hafa. Mampiseho ilay reny mikapoka imbetsaka ilay zanany amin'ny fehikibo ilay lahatsary, rehefa voampanga ho nandefa sariny manaitaitra tao amin'ny tambajotra ilay zaza. Fanamarihana : Global Voices dia tsy nandefa na nametraka rohy ahafahana miditra amin'ilay lahatsary mihintsy mba ho fanajana ny zon'ny ankizy ary ny lalàna mifandraika amin'ny fanararaotana sy ny herisetra aan-tokantrano any Trinidad sy Tobago.
Niresaka ny fomba fifehezana lany andro ataon'ny Indianina Andrefana ny Lalàna Mena ho amin'ny Rarin'ny Miralenta tao anaty lahatsoratra iray tanaty bilaogy momba io olana io :
Nahita ny renibeko nanome totohondry ny anadahiko (tsy omby kibo) aho noho izy nahavaky atody teny an-dàlana niverina avy tany am-pivarotana. Indray mandeha, norovitin'ny raiko ny akanjon'ny rahavavikeliko. Tsy ho soratako eto ny zavatra hitako sy henoko ataon'ny mpifanolo-bodirindrina aminay amin'ny zanany lahy.
Mampivarahontsana ny fahatsiarovako ireny fotoana ireny izay niainako na nahavoatery ahy nijoro vavolombelona tamin'ny herisetra amin'ny vatana sy amin'ny fihetseham-po. Indraindray ireo fomba entin'ny ray aman-dreny ao Karaiba anehoany ny fitiavany, fikarakaràny ary ny torolàlana anao no fomba mety tena hanimba anao ihany.
Nanohy ny mpanoratra hoe :
Tokony hahalala bebe kokoa isika mba hahafahantsika manao tsaratsara kokoa. Tokony mianatra miala amin'ny efa hay isika.
Fa tsy afaka manomboka izany lamina ho amin'ny fialana amin'ny zavatra efa hay izany ary ny fiverenana mianatra io indray isika raha mbola raisintsika ho zo ihany ary heverina fa tsy anisan'ny fiainana andavan'androntsika ary mandeha ho azy ny herisetra. Ilay reny nanao io lahatsary io sy nandefa azy tamin'ny aterineto dia nahafantatra fa ireo mpijery azy ao Karaiba dia hahatsapa ny ‘fifehezana tsaran'ny Indiana Andrefana’ rehefa mahita io. Nataony ho antsika io lahatsary io, mba anehoany antsika fa reny tsara izy, reny mieritreritra. Fantany fa araka ny zavatra nalefan'ny zanany vavy tamin'ny aterineto, te-hanontany ny olona ny amin'ny hoe [karazan-dreny] manao ahoana ny mampiasa…tanjaka-mafy amin'ny zaza 12 taona izay nandefa sary sahisahy momba azy tamin'ny aterineto.
Miainga avy amin'ny fankasitrahana ny nataon'ilay reny ka niafara tamin'ny horohoro sy fanamelohana ireo fanehoankevitra mikasika ilay lahatsary:
Eritrereto fa raha tsy nanao toetra toy izao ilay zaza tsy tonga tamin'izao fihetsika izao ny reniny? “Jusso” ny reny ve afaka mikapoka ny zanany toa izao?
— Quacey ملك الذات (@QuaceyL3) 23 Aprily 2014
Tsy mieritreritra aho oe ny kapoka no valiny fa tena mitsapa ny reniny hatramin'ny farany mihintsy koa ilay zanany
— kai a. barratt (@cutedougla17) 23 Aprily 2014
Tsy mieritreritra aho hoe ny kapoka no valiny fa tena mitsapa ny reniny hatramin'ny farany mihintsy koa ilay zanany
(“Fidarohana” dia fiteny mahazavatra ny Indianina Andrefana amin'ny fanasaziana ara-batana.)
dia tsy faly amin'izany ireo sasany mpampiasa Twitter :
Mijery ilay lahatsoratra misy ilay zazavavy mahazo daroka aho, mahamenatra izao karazana hetraketraka izao, ary izay mankasitraka izao koa dia mahatsiravina
Amin'ny fomba ahoana ny fandefasana lahatsarin'ankizy voadaroka toy izao amin'ny aterineto no tsy mitovy amin'ny fizaràna sary mamoafadin’ ankizy koa ? #trinidad
— Wesley Gibbings (@wgibbings) 23 Aprily 2014
— Anonymous (@indiesoultt) 21 Aprily 2014
@PimpetteLala Tena tsy itako instony ny ilazana ny tsy fanekeko an'izao an. Tena efa tonga amin'ny tsy fahombiazan'ny fitondran-dray aman-dreny mihintsy vao tonga amin'izao fidarohana izao.
— Kevin Ram (@kramtt) 22 Aprily 2014
@PimpetteLala Tena tsy itako intsony izay hilazàna ny tsy fanekeko an'izao an. Tena efa tonga amin'ny tsy fahombiazan'ny fitondran-dray aman-dreny mihintsy vao tonga amin'izao haavonà fidarohana izao.
@tv6tnt Nalefako tamin'ny YouTube io horonan-tsary io ary tsy mety afaka jerena. Vonoy any ry TV6 io horonan-tsary io ary aleo isika tsy andray anjara amin'io hetraketraka io.
— clc (@clc315) 23 Aprily 2014
@tv6tnt Notateriko tamin'ny YouTube io lahatsary io ary tsy afaka jerena intsony. Vonoy any ry TV6 io lahatsary io ary aoka isika tsy ho mpandray anjara amin'io hetraketraka io.
My View (Ny hevitro), bilaogin'i Phillip Alexander, naneho hevitra hoe ny zavatra vita no hitsarana ny fitaovana nampiasana, nefa maro ny mpampiasa Twitter no nanohitra io fomba fisainana io :
@tv6tnt Ny “Daroka” no fototry ny herisetra amin'ny fiarahamonintsika. Mitombo ny taranaka ao anatin'ny fahaizana mandratra olona raha manao zavatra diso iny olona iny.
— LifesupportCaribbean (@LifeSupportTT) 23 Aprily 2014
@tv6tnt Ny “Daroka” no fototry ny herisetra amin'ny fiarahamonintsika. Mitombo ny taranaka, ao anatin'ny fahaizana mandratra olona raha manao zavatra diso iny olona iny.
Maro ireo nampiasa ny Facebook mba hiady hevitra momba io resaka io. Tao amin'ny vondrona fifampiresahana True Trini Discussing Real Issues, niovaova ny fanehoan-kevitra. Nanoeho hevitra i Vishnu Ramoutar :
Maharary tamin'ilay ankizy na ara-batana na ara-tsaina io. Mety hisy fiatraikany aminy mandritra ny fotoana ela izao. Mahatsiravina ilay reniny. Tsy misy henatra na fikarakarana ny zanany vavy mihintsy. Tsy eny imason'olona no atao izany. Tsy eny mihintsy. Tsy misy fandeferana mihintsy ho azy.
Nanana fomba fijery hafa i Tara S. Ramlochan :
Kenakenaho ny tahony dia omeo vàhana ny voan-tsakay… ataovy hoe tsy nanao toy izao àry izy, dia tonga tany an-trano ilay zazavavy sy ny kibo beny…hisy hanao fomba famaky tantara mampitabataba avy eo dia hilaza hoe ny fitaizàna sy ny fanolànan-jaza…
Anilany, manazava bebe kokoa ny fanehoan-kevitry ny reny iray i Code Red :
lehibe tao amin'ny tokatrano tany Karaiba aho…fantatro fa ny fomba fisainana nentin-drazana dia tsy misy zavatra lehibe mampitabataba izany. toy ilay reny izay nitolona fatratra hahita fomba hifehezana sy hampianarana ny zanako lahy ankoatra ny fampiasana fehikibo aho, azoko tsara ny fikorontanan-tsain'ireny reny ireny (sic) …fa ny tena marina dia diso izany. Mahery setra (sic), mahahenatra ary vao mainka manimba azy fa tsy manatsara azy amin'ny fiainany rahatrizay. Ny olana dia hoe ahoana no hanovàna izany fomba fisainana efa tena latsa-paka ao amin'ny kolontsaina ao Karaiba izany?
Ny lahatsoratra dia nanadihady koa ny hoe ahoana ny fomba nentn-drazana niatrehana ny fifehezana tany amin'ny fiarahamonim-paritra tany :
Niharan'ny herisetra isika ary niaina niaraka tamin'ny fikorotanan-tsaina. Nampiasa herisetra isika. Tsy nahavita nahita na nieritreritra hampiasa fomba hafa isika. Nanamarina ny antony nampiasana ny herisetra isika. Lasa fihetsika mety ary natoraly ny herisetra.
Ao amin'ny fanarahana ny zavatra niditra, nahitsy ilay mpitoraka bilaogy mikasika ireo tamberina azony tamin'ny lahatsoratra napetrany voalohany :
Iray amin'ny tena zava-dehibe tamin'ny tamberina voaraiko dia ny hoe mpiray tsikombakomba tamin'ny fanalàm-baràka faobe aho ary nanao herisetra tamin'ny zazavavy hiditra amin'ny mahazatovo azy tamin'ny fizaràna ilay lahatsary…ary nametraka rohy ahitàna azy io ao amin'ny bilaogy. Raha te hiresaka ny fanararaotana atao amin'ny ankizy isika, azo antoka fa afaka atao izany tsy amin'ny fampiasana zazavavy 12 taona. Manaiky izany aho.
Nila fotoana elaela aho vao tonga tamin'ny fanekena io fisainana io. Nahita ankizy maro voadaroka isan'andro aho tany amin'ny toeram-pianarana. Azoko fa herisetra izany fa ny naha lasa zavatra nandeha ho azy izany tao antsaiko dia midika fa tamin'ny lafiny iray dia nohamaivaniko koa izany. Diso aho.
Ny tsikera hafa dia momba ny fahamenaran'ny mpamaky izay naneho fa mankaloiloy azy iny lahatsary iny :
Nisy ireo naneho hevitra fa tamin'ny fidirako tamin'ny nampisehoako iny zavatra mahamenatra iny dia niray tsikombakomba tamin'ny fametrahana ho ara-dalàna ny herisetra atao amin'ny ankizy aho. Izay hitako hoe sarotra hinoana dia iny lahatsary iny nankarary vavony azy ireo fatratra raha araka ny nolazainy…fa nataoko ho toy ny zavatra mandeha ho azy ao amin'ny fiainana andavan'andron'ny ao Karaiba [sy] ny herisetra mihatra amin'ny ankizy, ary tsy nieritreritra fa mety miatrika herisetra isan'andro ny olona ary mahita izany ho zavatra ratsy tokony hohelohina, mampikorotan-tsaina ary mankarary vavony.
Any amin'ny fanehoan-kevitra hafa, ny Lalàna Mena nanadihady ny anjaran-toeran'ny fomba fiseraserana vaovao amin'izao zava-mitranga izao:
Maro ny olona nanamarika fa tsy manana zo hanana kaonty ao amin'ny Facebook ny zaza 12 taona (mitsipaka ny làlan'ny fomba fampiasàna ny Facebook izany) ary tokony nanara-maso ny fampiasan-janany ny aterineto ilay reniny. Tsy niantomboka tamin'ny aterineto ireny haratsiana ireny, nafa kosa nitatra be ireny noho izy io.
Eo ankilany ny fiovan'ny teknolojia, ny fampiasana ny serasera sosialy dia lasa manambara fa olona maharaka ianao ary koa hoe mandray anjara amin'ny kolontsaina maneran-tany ianao. Tsy tia ho tara ny zatovo. Ny ankizy tsy miditra matetika amin'ny aterineto na ny kaonty Facebook dia miaina izany famerana izany ho toy ny fototry ny fanelingelenana toy ny mariky sasany maneho ny fahantrana ihany. Raha miala amin'ny Facebook ny ankizy dia ho noho ny zavatra mafanafana kokoa hataony izay, fa tsy noho ny zavatra nataon'ny ray aman-dreniny hialàny eo.
Afaka manao ar-bakieny ny zavatra rehetra isika amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera…mitsikera bebe kokoa ny amin'ny hoe ahoana ny firotsahantsika amin'ny media sosialy sady mieritreritra bebe kokoa ny hoe inona ny zavatra entiny.
Mety hoe ny fampiharana an'io no iray amin'ireo lesona manan-danja hivoaka ao amin'ny resadresaka ao amin'ny Code Red ety anaty aterineto :
Fomba fanehoan-kevitra ratsy ny fizaràna ilay lahatsary. Ilay lahatsary (sy ny lahatsoratra) nahazo olona maro…dia vokatry ny fanaovan'ny mpamaky ‘tiako’ azy, ny fanehoan-keviny, ny famakiany ary ny fizarany indray izany. Niarahana natao ny nahalasa malaza azy. Mila miaraka manamboatra ny fampianarana amin'ny alalan'ny fitaovana fiseraserana isika amin'izao fotoanatsika izao.
Ny zoky vavin'ilay zazavavy 12 taona dia nandefa lahatsary taorian'iny, niaro ny fihetsiky ny reniny, niantso ny kapoka ho “ala nenina farany” ary nilaza fa noho ny “fitiavana” dia nanao izany ny reniny.
Ny hajiantsary nampiasaina ato amin'ity lahatsoratra ity dia an'i Attila Acs, nampiasàna ny Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons license. Tsidiho ny tahri-tsary mifandimbini Attila Acs ao amin'ny flickr.